सबैले जान्नैपर्ने स्त्रीका १३ प्रकार र स्वभाव - Kendrabindu Nepal Online News
सबैले जान्नैपर्ने स्त्रीका १३ प्रकार र स्वभाव
हिन्दु धर्ममा स्त्रीलाई देवीको रुप मानिन्छ । जुन घरमा स्त्रीको इज्जत हुन्छ र उसलाई खुसी राखिन्छ त्यो घरमा माता लक्ष्मीको कृपा बनिरहन्छ र जुन घरमा नारीको सम्मान हुँदैन् उसलाई पीडा दिईन्छ त्यहाँ माता लक्ष्मीले दूरी बनाउछिन् भन्ने मान्यता छ । कुनै पनि मनुष्यको शरिरको वनावट चाल, ढाल, आवाज र चरित्रबाट उसको भाग्य पनि बताउन सकिन्छ । शास्त्रमा स्त्रीको विभिन्न प्रकारबारे उल्लेख गरिएको छ । ग्रन्थहरुमा स्त्रीहरुका लक्षणहरु पनि विस्तृत रुपमा पढ्न पाइन्छ । त्यसैले पनि ‘स्त्रीहरुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ’ भनिएको हुनुपर्छ ।
कुन प्रकारका स्त्रीको कस्तो स्वभाव ?
१. सधुवा (सुहागन) स्त्री
ज्योतिषशास्त्र अनुसार स्त्रीहरु विभिन्न प्रकार, सधुवा र विधुवा स्त्रीको लक्षणको बारेमा बताइएको छ । सधवा स्त्रीको दुवै हात कमल जस्तै सुन्दर हुन्छ । औलाहरु सिधा हुन्छ । हातको रेखाहरु सुक्ष्म तर सफा हुन्छ । हात चम्किलो र गोलाकार हुन्छ । यसको साथै हातमा पद्य, कानन, जयन्ती तथा स्वस्तिक रेखा स्पष्टसँग देखिन्छ । भाग्य रेखा काटिएको हुँदैन् । हातको मध्य भाग थोरै अग्लो हुन्छ । सम्पुर्ण शरिरको रंग एक समान देखिन्छ । आँखीभौ मिलेको हुँदैन् । दात एक अर्कामा टाँसिएको हुन्छ ।
२. विधुवा स्त्री
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार विधुवा लक्षण भएका स्त्रीको बाँया हातमा तीन वा छ वटा रेखा हुन्छ । भाग्य रेखा छिन्न भिन्न वा दन्ड रेखाबाट युक्त हुन्छ । यस्तो स्त्रीको कपाल खैरो हुन्छ, कान मोटो हुन्छ र मुख लामो हुन्छ । तिनिहरुको गला मोटो र बाहिर निस्किएको हुुन्छ । आवाज कर्कश हुन्छ । नङ चेप्टो हुन्छ ।
३. चित्रिणी स्त्री
यस प्रकारको स्त्री धेरै कम हुन्छन् । उनको जन्म गरिब परिवारमा भएपनि आफ्नो भविष्य सुखसँग भोग गर्छन् । धेरै सन्तान भए पनि केवल तीन सन्तानमात्रै जीवित रहन्छन् । त्यसमध्ये एक बच्चाको राजयोग हुन्छ । यस्ता प्रकारको स्त्रीहरुको आयु लगभग ४८ वर्षको हुन्छ ।
चित्रिणी स्त्रीहरु पतिव्रता, सज्जन, पति स्नेह गर्ने खालका हुन्छन् । हरेक काम बडो शिघ्रताबाट गर्छन् । यस्तो प्रकारको स्त्रीमा भोगको इच्छा कम हुन्छ । श्रृंगार पटारमा धेरै मन जान्छ । धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने काम गर्न सक्दैनन् । तर बुद्धिमान र विदुषी हुन्छन् । गीत गाउनु, गृहसज्जा र चित्रकला प्रिय हुन्छन् । तीर्थ, व्रत र साधु–सन्तको सेवा गर्ने खालका हुन्छन् । यस्तो स्त्री हेर्दा निक्कै सुन्दर हुन्छन् । टाउको गोलाकार, अंग कोमल र आँखा चञ्चल हुन्छ । कोइलीको जस्तो स्वर र कालो कपाल हुन्छ ।
४. पद्यिनी स्त्री
समुन्द्र शास्त्रका अनुसार पद्यिनी स्त्रीहरु सुशिल, धर्ममा विश्वास राख्ने, माता पिताको सेवा गर्ने र अति सुन्दर हुन्छन् । शरिरबाट कमलको जस्तै सुगन्ध आउँछ । लामो कद भएका, कोमल कपाल भएको हुन्छन् । बोली मधुर हुन्छ । पहिलो नजरमा नै सबैको आकर्षित गर्ने खालको हुन्छ । यिनीहरुको आँखा सामान्य भन्दा थोरै ठूलो हुन्छ । आफ्नो श्रीमानप्रति समर्पित हुन्छन् । नाक, कान, हातको औंला छोटो हुन्छ । गर्दन शंख जस्तै हुन्छ । अनुहारमा सधैं प्रसन्नता देखिन्छ । यस्ता स्त्रीहरु आफुभन्दा ठूलो प्रत्येक पुरुषको पिता समान, आफ्नो उमेरको भाई र आफुभन्दा सानो पुत्र समान सम्झिन्छन् । देवता, गन्र्धव, मनुष्य सबैको मन मोह लिनमा सक्षम हुन्छन् । सौभाग्यवती, बच्चा जस्तो, पतिव्रतामा श्रेष्ठ, योग्य सन्तान उत्पन्न गर्ने तथा आश्रितहरुको मान गर्ने खालको हुन्छन् । यस्ता स्त्रीको रातो कपडा धेरै प्रिय हुन्छन् । यस्तो प्रकारको स्त्रीहरु निकै कम हुन्छन् । जोसँग उनको बिवाह हुन्छन् त्यो पुरुष पनि भाग्यशाली हुन्छन् ।
५. हस्तिनी स्त्री
यस प्रकारका स्त्रीको स्वाभाव बदलिरहन्छ । उनीहरुमा भोग विलासको इच्छा धेरै हुन्छ । प्रसन्न स्वभावको हुन्छन् र खाना धेरै खान्छन् । शरिर थोरै मोटो हुन्छ । प्रायः आलसी हुन्छन् । गाला, नाक, कान, र टाउकोको रंग गोरो हुन्छ । क्रोध धेरै हुन्छ । कहिलेकाहि यीनीहरुको स्वाभाव क्रुर हुन्छ । खुट्टाको औँला टेडो मेडो हुन्छ । सन्तानमा छोरा धेरै हुन्छ । बिना रोगको नै रोगी बन्छन् । श्रीमान सुन्दर र गुणवान हुन्छ । झगडालु स्वभावको कारणले परिवारलाई सताउँछन् । श्रीमान उसँग दुखी हुन्छ । धार्मिक कार्य प्रति आस्था हुँदैन् । स्वादिष्ट भोजन मन पराउँछन् । उनीहरुको आयु लगभग ७३ वर्षको हुन्छ । विवाहको चौथो, आठौँ, १२ औं वा १६ औं वर्षमा उनको श्रीमानको भाग्योदय हुन्छ । यस्ता स्त्रीहरुको धेरै गर्भ खेर जान्छ । जीवनमा अनेक कष्ट झेल्नुपर्ने हुन्छ । यसको कारण स्वंय उ आफै हुन्छ । यिनीहरुको दुष्ट स्वभावको कारण परिवारमा उनीहरुको सोधीखोजी पनि हुँदैन् ।
६. शंखिनी स्त्री
शंखिनी स्वाभावको स्त्री अन्य स्त्रीहरु भन्दा थोरै अग्ली हुन्छन् । कोही धेरै मोटी र धेरै दुब्लो हुन्छन् । नाक मोटो, आँखास्थिर र आवाज गम्भीर हुन्छ । जहिल्यै पनि अप्रसन्न देखिन्छन् र बिना कारण नै क्रोध भइरहन्छन् । आफ्नो श्रीमानसँग रिसाई रहन्छन् । श्रीमानले भनेको कुराहरु मान्नु उनीहरुलाई गुलामी भएको जस्तो लाग्छ । यिनको मन सदैभ भोग विलासमा डुबिरहेको हुन्छ । दया भाव पनि हुँदैन् त्यसैले परिवारमा रहेर पनि अलग हुन्छन् । यस्तो प्रकारका स्त्री संसारमा धेरै हुन्छन् । यताको कुरा उता लाने र उताको कुरा एता ल्याउने बानी हुन्छ । धेरै बोल्छन् त्यसैले उनीहरुको अगाडि अरु मानिसहरु कमै बोल्ने मौका पाउँछन् । यिनीहरुको आयु लामो हुन्छ । यिनीहरुको सामुन्ने दुवै कुल (पिता वा पति) नष्ट हुन्छ । अन्तिमको समयमा धेरै दुःख भोग्छन् । त्यो समयमा मर्नको लागि पटक पटक इच्छा गर्छन् तर उनको मृत्यु हुँदैन् ।
७. पुंश्चली स्त्री
पुंश्चली स्वभावका स्त्रीको निधारमा चम्किलो विन्दु पनि मलिन देखिन्छ । यस स्वभावका स्त्री आफ्नो परिवारका लागि दुःखको कारण बन्छन् । यिनीहरुमा लज्जा हुँदैन् र आफ्नो हाउभाउबाट कटाक्ष गर्ने खालको हुन्छन् । यिनीहरुको हातमा नौ वटा रेखा हुन्छ । सिद्ध (पुण्य, पद्य), स्वस्तिक आदि उत्तम रेखारहित हुन्छ । यिनीहरुको मन आफ्नो श्रीमानको अपेक्षा भन्दा परपुरुषहरुमा धेरै लाग्छ । त्यसैले उनको सम्मान कसैले पनि गर्दैन । सबैले उपेक्षा गर्छन् । पुंश्चली स्त्रीहरु युवावस्थाको लक्षण १२ वर्षको उमेरमै देखिन थाल्छ । यिनिहरुको आँखा ठूलो र हात खुट्टा छोटो हुन्छ । स्वर तिखो हुन्छ । यदि उ सामान्य रुपमा कुरा गरिरहेको छ भने पनि कुनै विवाद गरेजस्तो देखिन्छ । यस्ता स्त्रीको भाग्य रेखा र पुण्य रेखा छिन्न भिन्न भएको हुन्छ ।
८. आतुरा स्त्री
यस्तो प्रकारका स्त्री जहिल्यै पनि हडबडिमा रहन्छन् । प्रत्येक कामको छिटो पुरा गर्ने जोश र उत्साह हुन्छ । त्यसकारण धेरैपटक काम पनि बिग्रिन्छ । यस्ता स्त्री सामान्य रुप रंग भएका हुन्छन् तर आफ्नो श्रीमानलाई धेरै प्रेम गर्छन् । यदि मनको कुरा केही पुरा भएन भने श्रीमानसँग झगडा पनि गर्छन् । नयाँ नयाँ साथी बनाउने स्वभाव हुन्छ र धेरै साथी केटीहरु हुन्छन् । धन सञ्चय गर्नमा कमजोर हुन्छन् । आफ्नो साथीहरुमा धेरै खर्च गर्छन् ।
९. डाकिनी स्त्री
यस प्रकारका स्त्री मिठो मिठो कुरा गरेर आफ्नो फाइदाको काम गर्न धेरै राम्रोसँग जान्दछन् । मानिसहरुलाई धोका दिने प्रकृतिका हुन्छन् । प्रत्येक मानिसहरुसँग धेरै निकटता र आफ्नोपन देखाउँछन् तर वास्तवमा भित्र भित्रै कसरी फाइदा उठाउने भन्ने योजना बनाईरहेका हुन्छन् । यहाँसम्म कि आफ्नो श्रीमानलाई धोका दिन पनि संकोच मान्दिनन् । धनको विशेष लालची हुन्छन् र धन पाउनको लागि अपराध गर्न पनि पछि पर्दिनन् । हेर्दा सुन्दर, वाणीमा मधुरता यस्ता स्त्रीहरुको सबैभन्दा ठूलो गुण हो ।
१०. प्रेमीणी स्त्री
प्रेमीणी स्त्रीहरु अत्यन्त सुन्दर, गोरो वर्ण, चञ्चल नेत्र, गुलाबी पातलो ओठ, लामो गर्दन र लामो कपालका धनी हुन्छन् । यस्ता प्रकारको स्त्रीहरुको दिवाना हजारौ हुन्छन् । एकपटक देख्नेले कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दैनन् । जति आकर्षक उनको रुप हुन्छ उति नै सौम्य उनको स्वभाव हुन्छ । आचरण एकदमै शुद्ध हुन्छ । परोपकार र प्रेमको भावना प्रवल हुन्छ । आफ्नो परिवार र श्रीमान बच्चाप्रति समर्पित हुन्छन् । यिनिहरुमा भोग विलासको समस्त साधन प्राप्त हुन्छ । स्वर्ण यिनिहरुको विशेष प्रिय हुन्छ ।
यस्तो प्रकारका स्त्री कमजोर शरिर, मलिन छाला, कन्जुस र निर्लज्ज हुन्छन् । आफ्नो गलत हर्कतको कारण परिवार र समाजमा बदनाम हुन्छन् । यिनिहरुमा आफ्नो श्रीमान र सन्तान प्रति कुनै मोह हुँदैन् । यसकारण घर परिवार पनि टुटछन् । प्रत्येक पुरुषको आफुप्रति आकर्षित गर्ने चेष्टा गर्छन् र धन पाउनको लागि पुरुषको साथ लिन्छन् । यिनिहरुको दिमाग अपराधले भरिएको हुन्छ । भोग बिलास पाउनको लागि अपराधको बाटो रोज्न पनि पछि पर्दैनन् ।
१२. स्वर्गिणी स्त्री
यस्ता स्त्री धर्मपरायण हुन्छन् । धार्मिक कार्यमा सम्मिलित हुन मन पराउँछन् । यिनिहरुको परिवार व्यवस्थित रुपबाट चल्छ । न कुनै वस्तुको धेरै पाउने लालच हुन्छ न कुनै वस्तु धेरै पाउने प्रयास गर्छन । जति छ त्यती मै सन्तुष्ट रहन्छन् । आफ्नो सन्तान प्रति विशेष लगाव हुन्छ । धन सञ्चय गर्ने गुण भएको हुन्छ । यस्तो प्रकारको स्त्री समाजमा ठूलो पदमा देखिन्छन् । रुप रंग सामान्य आकर्षण भएको हुन्छ । यस्ता स्त्री परोपकार गर्न सधैं सबैभन्दा अघि हुन्छन् ।
१३. बहुवंशिनी स्त्री
यस्तो स्त्रीको रंग गहुँगोरो हुन्छ । गृहस्थ पुरै धर्मले निभाउने खालको हुन्छन् । कहिल्यै पनि झुठ बोल्दैनन् र मन सफा हुन्छ । श्रीमान र परिवार उनको लागि सबैभन्दा माथि हुन्छ । समाजमा सम्मानित हुन्छन् र उच्च पदमा रहेको हुन्छन् । स्वभाव थोरै कडा हुन्छ तर छिट्टै मान्ने हुन्छन् । अरुलाई नराम्रो गर्ने र दोषारोपरण गर्ने मानिसहरुसँग टाढा रहन मन पराउँछन् । यस्ता स्त्री अनेक प्रकारको सम्पतिको मालिक्नी हुन्छन् । प्रेमको गुण यिनिहरुमा विशेष हुन्छ ।
यो भिडियो हेर्न छुटाउनु भयो कि ?
छोरी जन्माए एक हजार भत्ता पाइने !
सेक्स जेल : किन एकै उमेरका महिला मात्र राखिन्छ ?
युवतीका कारण गोली चलेको प्रहरीको निष्कर्ष